के हो सास फेर्ने सही तरिका ? – Korea Pati
के हो सास फेर्ने सही तरिका ?
September 14, 2020 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on के हो सास फेर्ने सही तरिका ?
सास फेर्नका लागि हामीले अतिरिक्त बल वा प्रयास गर्दैनौं । किनभने यो शरीरको एक स्वचालित प्रणाली हो, सास फेर्नु । जबकी यसरी सास लिने क्रममा सबैको शरीरमा पर्याप्त अक्सिजन आपूर्ति भइरहेको नहुन सक्छ ।
जब शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ, अनेकथरी रोगले गाँज्न सक्छ । त्यसैले प्राणायाम जस्ता केही विधीको अभ्यास गरिएको छ, जसले शरीरमा पर्याप्त अक्सिजन आपूर्तिका लागि मद्दत गर्छ ।
एक व्यक्ति एक मिनेटमा १८ पटक सास लिन्छन् । एक घण्टामा एक हजार ८० पटक र एक दिनमा २५ हजार ९ सय २० पटक सास लिन्छन् । तर एक रिसर्च अनुसार हरेक १० जना व्यक्तिमा ९ जनाले यस्तो गल्ती गरिरहेका हुन्छन् । अधिकतम व्यक्ति छातीले सास लिने गर्छन् । यस तरिकाले सास लिँदा पूर्ण र सहि रुपले अक्सिजन शरीर भित्र पुग्दैन । यसले गर्दा हामी रोगी हुन्छौं । किनभने खाना वा अन्य पौष्टिक पदार्थ जत्तिकै हामीलाई अक्सिजन पनि अपरिहार्य हुन्छ ।
सहि तरिकाले सास लिनाले हाम्रो शरीरमा राम्ररी अक्सिजन फ्लो हुन्छ । अक्सिजन शरीरको सबै भागमा सजिलै पुग्छ । हामी घर वा अफिसमा बस्दा हामीलाई अक्सिजन पुगिरहेको हुँदैन । यसरी सहि ढंगले सास फेर्दा अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा पुग्छ ।
सामान्य ढंगले वा सामान्य प्रक्रियाले जति सास लिइन्छ त्यो अपुग हुन्छ । किनभने अहिले हामी धेरैजसो समय घरभित्र विताउँछौ । खुला हावामा बस्दैनौ । त्यही कारण सहि ढंगले सास लिनैपर्ने अवस्था छ ।
पेटले सास लिँदा फोक्सोसहित पुरै शरीरमा अक्सिजन राम्ररी प्रवाह हुन्छ । यसले गर्दा मस्तिष्कमा पनि राम्ररी अक्सिजन पुग्छ ।
श्रम तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्री लाई एक यूवाले लेखे खुलापत्र !
उच्च रक्तचाप नियन्त्रण नगरे यी अंगमा पुग्नसक्छ क्षति
July 2, 2020 July 2, 2020 गुरुदत्त न्यौपाने
विकार र चिन्ताले ग्रस्त एक रोग
June 17, 2020 गुरुदत्त न्यौपाने
July 27, 2020 July 27, 2020 गुरुदत्त न्यौपाने